Inona no dikan'ny TPI amin'ny kodiarana bisikileta? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Tpi kodiarana bisikileta - ahoana no hanapahanao hevitra
Inona no dikan'ny TPI amin'ny kodiarana bisikileta?
kofehy isaky ny santimetatra
Ny olana mekanika mahazatra indrindra, ary angamba ny mahasosotra indrindra amin'ny familiana dia ny kodiarana iray. Saingy androany isika dia mijery torohevitra vitsivitsy, hacks fanamboarana bisikileta kely, ary ny zavatra azonao vidiana mba hahatonga azy ireo ho faty dia ny fomba hisorohana ny kodiarana fisaka, noho izany laharana voalohany, ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny tsy misy fantsona. raha mbola tsy nanao ianao. Ka io dia hialana amin'ny mangana, raha lazaina, avy amin'ny kodiarana fisaka amin'ny alàlan'ny familiana zavatra maranitra, toy ny tsilo.
Ka raha tokony handalo ny kodiarana sy hiditra amin'ny fantsona ianao dia manana sealant ao amin'io kodiarana io, ary hikorisa, ary tokony hameno ireo banga kely ireo. Kaikitry ny bibilava. Izay no lazaiko momba ny mangana.
Raha manana fantsona ao anaty kodiarana ianao, raha sendra vato misakana toy ny vato ianao, dia hanindrona ny kodiarana sy ny fantsona eo amin'ny sisiny izany, ary eo no ahazoanao pinch. Fa mazava ho azy fa tsy hahazo izany ianao raha tsy misy fantsom-panafody. Saingy mbola azonao atao ihany ny mahazo ireo kodiarana manaikitra bibilava, raha tena mikapoka mafy ny kodiarana amin'ny sakana ianao dia hanimba ilay kodiarana.
Nefa sarotra be noho ny fametahana fantsona, ary misy fomba fanamboarana azy. Ny fomba voalohany dia ny mitondra ny iray amin'ireo kitapo plug ireo. Ka raha ny habeny no mitovy amin'ny habeny dia mamiratra ireo fitaovana ireo.
Azonao atao fotsiny ny mameno azy io ary haharitra mandrakizay izy ireo. Haharitra ny ain'ity kodiarana ity izy ireo. Mazava ho azy, raha lehibe loatra izy ireo, raha mihoatra ny iray santimetatra na roa, dia mila manamboatra araka ny tokony ho izy ny kodiarana ianao, saingy tena tsy fahita izany.
Ankehitriny dia mandeha any amin'ny farany avo indrindra amin'ny tolo-kevitr'izy ireo aho, ny milliliter ho an'ny haben'ny kodiarana, saingy mieritreritra aho fa manampy kely kokoa ny tombo-kase amin'ny kodiarana. Ary raha maro amin'ireo zavatra ireo no mihena manodidina, eny miha mavesatra kokoa izy io, saingy misoroka fahasimbana kely kokoa. Hahita marika mora vidy kokoa ianao.
Mandeha haingana be kokoa fotsiny izy io ary zavatra manify kokoa ihany no misy lavaka mitovy ihany. Raha mampiasa fantsom-batana ao anaty kodiaranao ianao ary mahazo totohondry manaikitra bibilava matetika, ny kely indrindra amin'ny zavatra hataoko dia mijery ao anatin'ny kodiaranao ary jereo ny kasetyo. Raha simba sa misy? Raha tsy eo izy dia mety ho simba ny fantsona amin'ireo loha miteny ireo.
Azonao atao ny mahazo kasety rim bisikileta mety, na afaka mampiasa Gaffer Tape na ilay kasety tiako taloha ianao. Ny fahazoana puncture vitsy dia kely fotsiny dia midika hoe paompy mafy kokoa ny kodiarana. Ankehitriny izaho sy i Steve dia tena niresaka tsara tamin'ilay tompon-daka eran-tany midina any Fabian Barel tamin'ny ririnina lasa teo tany Frantsa.
Ary nambarany fa ny mpandeha midina any ambany dia afaka misoroka ny kodiarana raha toa ka mampidina ny kodiarany hatramin'ny 60 PSI fotsiny izy ireo. Mazava ho azy fa misy fahamarinana vitsivitsy amin'izany, saingy tsy dia azo ampiharina izany satria tsy ho voafehinao mafy ny kodiarana. Noho izany, ho an'ny ankamaroan'ny mpamily, heveriko fa ny tsindry fanerena kodiarana tsara dia eo anelanelan'ny 18 sy 30 PSI.
Ny ankamaroan'ny mpamily dia mety ho faly amin'ny PSI ambany 20 ka hatramin'ny 20 ambony. Saingy hitako ny tenako amin'ny làlana masiaka be amin'ny toe-javatra sasany izay mety tsy manana fantsom-panafody ary hampisondrotra ny kodiarako amin'ny manodidina ny 32, angamba hatramin'ny 35 PSI aza. Tena hanimba ny zava-bitan'ny kodiarana izany, saingy afaka manavotra ahy tsy ho nilaozana eo afovoan'ny toerana aho.
Vahaolana lehibe hisorohana ny kodiarana fisaka, fa angamba tsy ny tena fampiharana, ny fametrahana rivotra bebe kokoa ao anaty kodiarana. Na izany aza, heveriko fa ny mpitaingina mavesatra kokoa, ary miresaka momba ny fomba fitondrana fiara sy ny lanjan'ny vatana aho, dia te hampitombo ny tsindry avo kokoa hanandrana sy hisorohana ireo mangana ireo. Saingy tsy voatery hamaha azy tanteraka izany.
Heveriko fa ny mpitaingina mavesatra kokoa dia mety te hifindra amin'ny kodiarana sarotra kokoa, koa andao hiresaka kodiarana vitsivitsy isika. Raha mpitaingina mavesatra no mifikitra be amin'ny kodiarana sasany, handeha ho any amin'ny kodiarana sarotra kokoa aho amin'ny fametahana rindrina kokoa. Mpandeha maro miaraka amin'ny dia fampiatoana fampiatoana 140 mil na fitsangatsanganana mihantona 160 mil no mahazo tombony amin'ny fihazakazahana amin'ny kodiarana midina roa.
Raha izaho manokana, raha hitondra ity bisikileta enduro ity aho, dia fampiatoana mihantona 170 mil, mankany amin'ny Alpes na any amin'ny toerana toa an'i Wester, izay misy freins sy bontsibontsina be, vato be dia be, dia hianjera amin'ny kodiarana midina roa aho. mandritra ny andro sisa, afa-po tamin'ny kodiarako aho. Marina, andao hiresaka momba ny TPI, kofehy isaky ny santimetatra. Ka io no kodiarana midina any Continental.
Io no mpihazakazaka voalohany, ny kodiarana mafy indrindra ataon'izy ireo. 27,5 x 2.4 izao, noho izany misy vatan'ny fatin'ny nilona eto isika.
Ary arakaraka ny haben'ny kofehy isaky ny santimetatra no mahasarotra azy. Ary ao ambanin'io kodiarana io dia manana kofehy enina misy kofehy 360 isaky ny fatin'ny nilona isika. Mijery ny taratasiko aho, manana plies 4 ianao 240.
Ka ny kodiarana mafy indrindra ataon'izy ireo, nefa izy koa no mafy indrindra. 1 300 grama ho an'ny iray monja. Ka handeha ho any amin'ny tetik'asa Kaiser isika izao, ka kodiarana maivana kokoa.
Ny mombamomba azy dia toy ny amin'ny kodiarana midina. Fa ankehitriny raha tokony ho ny sosona vita amin'ny fingotra roa dia manana sosona iray sy sosona fiarovana maivana kokoa isika. Nandeha kodiarana aramid izahay.
Ka aforeto toy ny ahitanao izay mora kokoa indray. Tsy dia milamina, fa mora tehirizina ary mazava ho maivana kokoa. Izany no antony lehibe.
Saingy ankehitriny dia ahena ho efatra sosona ny fatin'ny nilona 240 TPI eo ambanin'ny dian-tongotra ary sosona telo 180 eo amin'ny sisin-dalana isika, mitahiry 350 grama, ka io no kodi-safidin'ny safidy ho an'ny mpikatroka enduro maro. Amin'ireo làlana mety tsy dia mateza akory dia hampiasa pne midina ho an'ny sasany amin'ireo hazakazaka ireo izy ireo, afa-tsy ilay antsoiko hoe kodiarana. Ireo Mountain Kings vaovao, izany ilay 27 five x 2.3, ary maivana indray izy.
Manana 705 grama izy ary mitovy ny TPI amin'ny Kaiser. Andao jerena izao ny maivana indrindra amin'ny mizana, kodiarana. Ho an'ny King Race dia kodiarana haingam-pandeha haingam-pandeha.
Ny fanoherana mihodina dia ho kely eto. TPI ihany, fa indray. Seza efatra misy 240 eo ambanin'io Tread io, sosona telo misy 180 amin'ny sisiny.
Vitsy kokoa ny fingotra, nidina hatramin'ny 545 grama isika izao, latsaka ny antsasaky ny lanjan'ny iray amin'ireo kodiarana midina ireo. Ho tsara amin'ny fitaterana an-tsambo izany. Ny ankamaroan'ny mpamily dia ho tonga lafatra amin'izany.
Na izany aza, raha mitondra fiara amin'ny faritra tery ianao, tena mahavariana fa tsy handeha toa an'ity kodiarana ity izany toe-javatra izany. Noho izany, ny fisafidianana kodiarana tsirairay ho an'ny fombanao mitondra fiara dia tena zava-dehibe. Ary raha mitaingina tany be vato ianao dia mety mieritreritra ny hanana kodiarana sarotra kokoa.
Ny teboka farany iray momba ny safidin'ny kodiarana dia ny fantatro fa misy olona hisafidy ny kodiarany mifototra amin'ny lanjany. ary mankanesa any amin'ny kodiarana mavesatra kokoa, satria fantatrao fa ny kodiarana matanjaka iray dia tsy maintsy milanja iray kilao na mahery ho an'ny kodiarana hazakazaka mafy indrindra. Ka rehefa mihabe ny taona dia mihalasa kodiarana ny kodiarana.
Ary midika izany fa ny sidewalls dia mety ho somary reraka sy mihetsika, ary raha manidina ny kodiarana ianao ary mihazakazaka azy dia ho simba ihany koa izany, fa rehefa tsy dia manitsaka intsony ny kodiarana dia tsy dia misy fitaovana loatra eo anelanelan'ny sakana sy ny anao Rim, izay midika fa ny kodiarana fisaka dia mety ho mahazatra kokoa. Marina, izao momba ny fidiran'ny kodiarana, ankehitriny dia efa nahita an'io karazana io isika nandritra ny taona vitsy lasa. Ary mazava ho azy fa manandrana misoroka ny punctures izy ireo.
Ireo dia tena kendrena bebe kokoa amin'ny enduro, ny fidinana ary ny mpomba ny hazakazaka noho ny olon-drehetra, fa na ny bisikileta e-bisikileta aza dia tena fampiasa tokoa amin'ireo. Izy rehetra dia samy manandrana mamaha ny olana mitovy amin'ny fomba hafa kely. Saingy misy zavatra iray tena aroson'izy ireo mpamily hazakazaka: ny fahaizany mitondra fiara amin'ny kodiarana fisaka.
Ka dia mahita mpitaingin-tsambo marobe isika miaraka amin'izany, ary na dia mety ho lany fotoana kely aza izy ireo dia afaka mamita sy manangona isa sarobidy. Ka manana zavatra toa an'ireny MrWolf Bangers ireny isika, manana CushCores, manana PROCORE Schwalbe aho ary manana zavatra vita an-trano mihitsy aza toy ny foam noodle pool izay manandrana mampiato ireo olan'ny kodiarana ireo. Ka zavatra toa an'i CushCore, manana ny fitaovana misy foam ianao izay mandeha manodidina ny kodiarana, na tsy azoko antoka tanteraka na foam-foam io. fa karazam-bovoka toy ny plastika io.
Izany dia manome cushioning. Ka misy fiatraikany amin'ny fomba fandehanan'ny bisikilety ihany koa. Ary manana paosy rivotra roa sosona ianao.
Tahaka ny kodiarana mahazatra, izay ahafahanao manitsy ny tsindry. Koa satria tsy tokony havelanay hanery anao kokoa ny kodiaranao, dia mbola manana ny fitokisan'ireo fampidirana rehetra ireo ianao, mba ho ara-drariny. Ary midika fotsiny izany fa manana fitaovana bebe kokoa ianao eo anelanelan'ny sisinao sy ny kodiaranao indray.
Ho an'ny tena mitaingina hazakazaka, hazakazaka midina, tsara kokoa ny misoroka loza. Fa mazava ho azy fa manome lanja kely ihany ianao. Ny lanjan'ny spin dia tena zava-dehibe amin'ny kodiarana.
Na izany aza, milaza ny sasany amin'ireo mpanamboatra ireo fa afaka mitondra kodiarana maivana kokoa ianao. Ka ario ny paozinao roa dia mihazakazaka amin'ny kodiarana ply tokana ianao. Mbola hijerena raha tena manakana ny fahasimbana io, mihoatra noho ny mitondra fiara amin'ny kodiarana roa.
Raha mbola nilalao tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany aho tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, ireo mpitaingina an'i Michelin toa an'i Steve Pete dia nanana fantsom-boaloboka, karazana busa hafahafa, sahabo ho 5 milimetatra ny hateviny, tena tsy dia tsara ny rivotra taloha, ianao ' d tsy maintsy manosika azy ireo isan'andro, fa saika najanon'izy ireo ny puncture, mbola azonao atao ny manintona azy ireo, saingy hevitra tsara dia tsara ireo, saingy maro amin'ireo vahaolana ireo no tena kendrena amin'ireo mpitaingina fiara sy ireo mpandeha mavesatra indrindra izay tsy mampaninona anao ny manampy kely lanja kely kokoa ho an'ny kodiarany, mety tsy ho an'ny ankamaroan'ny bisikileta an-tendrombohitra izy ireo, farany fa tsy izay ihany, manandrana manadino ny mitaingina anao, azoko antoka fa manana an'ity namana ity isika izay mitaingina toy ny devoly tasmanianina izay mavesatra be amin'ny bisikileta. Jack, mijery anao ao ambadiky ny fakantsary aho ary tena Blake. Mpandeha masiaka fotsiny izy ireo, ary manasazy ny kodiarany ary hamono azy ireo, koa raha tsy mampaninona anao ny mandatsaka haavo na malama fotsiny, manandrama mamoaka zavatra, miezaha ho mora kokoa amin'ny bisikileta, aza hadino ny puncture. punctures.
Tiako ny maheno ny anao. Tehirizo eto ambany io. Iray izay mety tsy nalahatro tany.
Fa tiako koa ny maheno momba ny traikefa namboarin'i C. nitaingina kodiarana somary maivana foana aho, noho izany dia manana an'ity Barons ity fotsiny aho, ny kodiarana enduro, amin'ity bisikileta ity. Mihazakazaka mafy aho, avo kokoa noho ny ankamaroan'ny hafa.
Fa zavatra efa nahazatra ahy izany, ka mihazakazaka eo amin'ny 30 PSI aho ary manitsy ny fitondran-tenako mitondra fiara amin'izany. Angamba tsy tonga lafatra, fa tena tiako ny manao an'izany. Izy io koa dia mitazona ny bisikileta ho maivana sy maivana hatrany.
Raha te hahita lahatsoratra hafa ianao, dia jereo ny fitsangantsanganana an-tsandrin'i Blake ao Westchester, na inona na inona, na iray amin'ireo zavatra ireo, kitiho etsy. Ho an'ny '89 amin'ny isa, tsindrio eo io. Atolory ny ankihiben-tànanao raha tsy tianao aho dia tsy tiako ny kodiarana fisaka ary tsindrio ny bokotra eo ambaniny.
Inona no atao hoe TPI tsara ho an'ny kodiarana bisikileta?
Ny kalitaon'ny casing corddianotondroin'nyTPI(kofehy isaky ny santimetatra) na EPI (mifarana isaky ny santimetatra). Amin'ny ankapobeny, ny avo kokoa ny kofehy isaky ny santimetatra (TPI) ny avo kokoa ny kalitaon'nykodiarana.
Raha miditra ao amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ianao amin'izao andro izao, dia ho hitanao ity kodiarana lehibe mifantina ity. Manana kodiarana amin'ny fepetra samihafa izahay, bisikileta samy hafa. Ary koa, manana haben'ny kodiarana telo malaza isika amin'izao fotoana izao, ka tsy hiditra amin'izany.
Hijery ny zava-bitan'ny kodiarana fotsiny izahay. Misy zavatra telo tena misy fiatraikany amin'izany. Miankina amin'ny làlam-by, ny fehin-kibo ary ny fatin'ity kodiarana ity izany, fa andao jerena fotsiny ny fiantraikan'io lamina io amin'ny fomba mandeha amin'ny bisikiletanao.
Hiresaka momba ny haben'ny pimple aloha isika. Miresaka momba ny bokotra fingotra aho, tsy misy zavatra hafa. Izay no antsoiko hoe kodiarana ambany profil.
Hitanao fa tena kely ny kirihitra vita amin'ny fingotra, ambany dia ambany amin'ny kodiarana. Ka ity dia handeha hiasa tsara amin'ny sehatra feno fonosana ary ity dia handeha hihodina tsara. Tsy hanakana anao izany ary koa zavatra misy mony lehibe kokoa, fa amin'ny sehatra sarotra, angamba ny fiampitana firenena, izay hikodiadia haingana dia haingana ary izany dia tokony hihazona ny afovoany, ho hitanao ny fomba ahalehibe azy ireo ary ankehitriny ireo nuby lasa miha mahomby Ny manaikitra ny zavatra malefaka dia manome anao hery hibaikoana bebe kokoa, fa angamba tsy dia tsara amin'ny fitaovana mafy.
Hatramin'ny tampon'isa amin'ny kodiarana midina. Ireo bokotra ireo dia lehibe kokoa. Mametraka fingotra bebe kokoa amin'ny tany izany, manaikitra tsara amin'ny tany malefaka, manome freins tena tsara ary mipetraka tsara sy lehibe.
Ianao koa dia manana kiborin'ny sisiny lehibe sy voatonona eo ho eo amin'ny zorony tena tsara. Aorian'ny haben'ny pimples, ny zavatra manaraka tena zava-dehibe dia ny halaviran'ny lamina mombamomba. Toy ny fitsipika ankamantatra, arakaraka ny maha akaiky azy ireo azy ireo rehefa tena tafahitsoka ao anaty kodiarana afovoany izy ireo, dia vao mainka tsara izany ao anatin'ny toe-javatra sarotra.
Raha mifindra amin'ity kodiarana ity ianao dia ho hitanao fa lehibe kokoa ny elanelan'ny lugs. Io dia hiasa tsara kokoa amin'ny fotaka satria hamafana tsara kokoa izay midika fa tsy hipitsoka ao anatin'io kodiarana io ny fotaka, fa ho hitanao koa ny sisin-tany maro kokoa handavaka an'io fotaka io. Ny sakan'ny kodiarana dia mitovy amin'izany.
Raha ny fepetra no jerena dia misy kodiarana manify mamaky tsara amin'ny fotaka, raha toa kosa ny kodiarana lehibe sy midadasika kokoa ho an'ny aretina maina masiaka kokoa. Ny kodiarana lehibe iray malalaka dia mety hitsingevana ambonin'ny tampon'ny fotaka amin'ny toe-javatra tena ratsy. Ka andao jerena ny mombamomba ny kodiarana.
Manana ny bokotra afovoany sy ny bokotra eo anilany ianao. Ireo no hampiasainao rehefa indram-bola ny bisikileta, mazava ho azy fa tena ilaina amin'ny zoro. Ity dia kodiarana midina miaraka amina stud lehibe eo amin'ny sisiny ary misy tohiny tsy tapaka.
Izany dia manome anao fangejana tsara rehefa nindrana ny bisikileta. Midina amin'ny kodiarana iray, mazava ho azy fa kely kokoa, ary tsy dia tononina loatra ny sisin-tany. Hivezivezy haingana be kokoa izy io, saingy tsy ho voafehiny kokoa ny zorony.
Raha mijery ny trondro afovoany ianao, manomboka amin'ity kodiarana midina ity dia misy lugs lehibe koa eo afovoany. Izy ireo koa dia mitodika any amin'ny lalana hitanao. Ity sisiny mitarika ity dia voadona ka mihodinkodina haingana ny kodiarana, fa any aoriana dia manana zoro 90 degre ianao, noho izany ny sisinao vaky.
Amin'ity kodiarana ity dia manana vokatra mahery vaika ianao. Mazava ho azy, ny valisoa ho an'ity dia ny tsy hikodiadia haingana toy ny mombamomba azy eo afovoany. Indraindray ianao dia afaka mahita fa ny downhillers dia manapaka ireo hazondamosiny afovoany ireo rehefa tsy dia mafy loatra ity lalana ity ary haingana kokoa izany ny tena zava-dehibe dia manaova kodiarana mihodina haingana eo amboniny.
Ny fandehanana any amin'ny kodiarana dia mahita endrika maodely malama kokoa eo afovoany ianao, ambany kokoa, mihodina haingana be, fa noho ny freins mahery dia tsy miadana haingana ianao toy ny ataonao amin'ny fehezam-boninkazo lehibe eo afovoany. Kodiarana maro koa no mitodika any. Midika izany fa misy zana-tsipìka kely eo anilan'ny kodiarana izay hampiseho aminao ny fomba fitondrana io kodiarana io.
Indraindray izy ireo dia mety tsy hitovy amin'ny voalohany ka hatrany aoriana. Indraindray tadiavinao ny kodiarana aloha hihazona tsara kely kokoa ary angamba ny fananan'ny kodiarana ao aoriany dia mihodina kely kokoa. Misy koa ny kodiarana sasany izay eo anoloana na any aoriana manokana.
Ny tonga ao an-tsainao dia ny Maxxis Minions taloha. Ny kodiarana aloha sy aoriana dia samy manana lamina falehany avokoa, saingy fantatro fa be ny downhillers taloha izay tia ny toetran'ny kodiarana aloha ary mampiasa azy eo aloha sy aoriana fotsiny, ary raha mijery ireo fifehezana mitaingina hafa ianao dia azonao atao ny milaza fa ny bandy lahy sy vavy miampita firenena dia aleony ny kodiarana mihodinkodina haingana kokoa ary maivana fa tsy ny kodiarana lehibe sy mavesatra izay manome fangejana be nefa miadana. Ka misy kodiarana tsara sy haingana ary maivana, nefa mety totohondry mora foana ary amin'ny toe-javatra tafahoatra dia tsy mandeha tsara amin'ny lalana mideza sy feno fotaka.
Kodiarana lehibe kokoa, mavesatra kokoa, fingotra betsaka kokoa izay tena zava-dehibe ny fihazonana. Amin'ny làlana sasany, ny fanoherana mihodina dia mety ho zava-dehibe ary mety mieritreritra ny handeha hidina ambany kokoa ianao eo afovoany, fa amin'ny ankapobeny dia mila kodiarana lehibe kokoa sy matanjaka kokoa misy lugs lehibe kokoa ianao. Mipetraka eo afovoany i Enduro, mety hidina ambany izy io, saingy tsy afaka mitaingina kodiarana mavesatra be ianao satria mety mandeha lavitra ary mila kodiarana mihodina haingana.
Azonao atao ihany koa ny manao dingana dimy miaraka amin'ny fepetra samihafa. Tsy afaka mifikitra amin'ny kodiarana fotaka na kodiarana maina ianao. Afaka mandeha kodiarana mpanelanelana ianao ary mitaingina zavatra eo afovoany fotsiny ary manantena fa hahomby amin'ireo dingana rehetra ireo.
Ka nohazavaina ny mombamomba ny kodiarana. Araka ny hitanao dia misy miovaova taonina. Raha mila lahatsoratra misimisy kokoa avy amin'ny GMBN dia azonao atao ny manindry eto amin'ny toerana misy ahy, Marc sy Si miresaka momba izay fanerena kodiarana ampiasainay.
Manana solontena manerana ny solaitrabe isika, manomboka amin'ny cross-country, enduro ary midina. Ka tsindrio eo raha te hahita ilay lahatsoratra ianao na tsindrio eto ambany raha tianao ny mahita ny fomba famariparitan'i Marc sy ny fanazavany ireo fork fampiatoana. Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa mahasoa azy dia tsindrio ny bokotra 'Tiako' etsy ambany ary azonao atao koa ny manindry ahy raha tsy te hahita lahatsoratra avy amin'ny GMBN ianao.
Misy kodiarana TPI kokoa ve?
Tendrombohitra midina ambanykodiarana bisikiletamety mampiasa 60tpcasing, raha ny fiampitana firenenakodiaranana lalanakodiarana bisikiletamety ho 120tp. Ny haben'ny kofehy kely kokoa, hoy izy, dia mahatonga ny avo kokoatpary kely kokoa ny fingotra fonosina eo anelanelan'ny kofehy, manao nykodiaranamaivana sy malefaka kokoa eny an-dalana.
Ity lahatsoratra ity dia tsy notohanan'ny mpitaingina bisikileta fanehoan-kevitra, tranokala tena tsara fotsiny ahafahanao mandefa zavatra mora vidy amin'ny Internet mankany Japon somebackels tena tsara ihany koa ka matetika aho no miantsena eo anelanelan'izy roa fa mbola nanafatra kodiarana an-tserasera ihany aho, ka nieritreritra aho fa manamboatra lahatsoratra momba ny kodiarana ampiasaiko, ny kodiarana izay atoroko amin'ny fampiofanana sy ny mitaingina bisikilety eny an-dalana ary koa ny fivezivezena ka andao hanokatra ny fonosana ary hijery ireo kodiarana. Manana kodiarana bisikileta ihany koa izahay, saingy tsy hiresaka momba azy ireo isika anio, ka ho hitanao eo noho eo fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ireo kodiarana ireo sy ireo kodiarana ato amin'ity boaty ity, ary koa ity kodiarana eto ity hoops tsy aforitra.
Noho izany dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny kodiarana, antsoina matetika hoe kodiarana clincher, ary ireo dia toy ny kodiarana mivalona arakaraka ny kodiarana, fa amin'ny ankapobeny, milaza ny olona fa mora kokoa ny miditra sy miala amin'ny kodiarana ny kodiarana satria fotsiny izy ireo Somary malefaka kokoa aho ary ny kodiarana midadasika kokoa dia somary mora vidy kokoa noho izany ahafahanao manangona vola kely amin'ny alàlan'ny lalana misy ny vakana, ka andao hizaha ny sasany amin'ireo safidy ireo. Ny kodiarana voalohany tiako horesahina dia ny iray amin'ireo kodiarana komuter tiako indrindra ary ity dia.
Schwalbe Tsy dia azoko antoka ny fomba fanononana azy, ka izaho no orinasa Schwalbe, ny maodelin'ity kodiarana ity dia ilay hazakazaka marathon izay koa na oviana na oviana dia an-tserasera ity dia iray amin'ireo kodiarana komuter malaza indrindra noho izany ny ankamaroanao dia mety mahafantatra an'io kodiarana ka manomboka amin'ny endri-javatra manan-danja momba ity kodiarana ity dia tena mora tokoa izany fa tsy ratsy akory fa manodidina ny dimy amby roapolo dolara eo ho eo satria rehefa nividy azy an-tserasera tamin'ny vidiny ara-dalàna tsara aho dia nisy mombamomba rano teo amboniny dia tena miaro matevina izy io , raha mijery ity latabatra ity ianao eto dia misy ambaratonga dimy amin'ny carte de protection eo amin'ny latabatra voalohany roa fito ary tsara izany, heveriko fa efa nitaingina kodiarana nandritra ny roa taona mahery tamin'ny bisikileta mpandehako aho, izaho sySchwinn Madison mavo. mbola tsy totohondry ary misy kilaometatra maro kilometatra amin'ity bisikileta ity dia tena kodiarana matanjaka izy ireo, ka izao dia manana mpisolo toerana ho azy ireo aho izao, koa ny mombamomba ny rano eo an-tampony koa eo anilany dia manana fehiloha fotsy kely mahafinaritra izay mahatonga azy io. kely Manasongadina anao lava kokoa aho mitaingina ny marina indrindra mitaingina bisikileta komuter amin'ny 25 aho satria mbola bisikileta amin'ny hazakazaka io dia mbola fixie tsy misy toerana be loatra ho an'ny kodiarana, raha manana toerana kely kokoa ho an'ny kodiarana amin'ny komuter aho afaka mandeha 28 na lehibe kokoa aza dia manjaka habe lehibe kokoa ho an'ity kodiarana ity ianao mba hahafahanao mahazo ny habe lehibe kokoa nefa azo inoana fa maharitra izy ireo, nanoratra an'arivony kilaometatra tamin'ny toeram-pitrandrahana tsy misy olana aho, tsy misy kodiarana iray mihitsy ary mitondra fiara tsara izy ireo dia mitondra fiara foana aho. Tena kodiarana mafy orina amin'ny orana, vidiny lafo tokoa, tena tsy resy. Torohevitra matanjaka tokoa ho an'ny kodiarana Schwalbe Marathon ka ny kodiarana manaraka izay nodidiako dia avy any Schwalbe na midika hoe ianao deDurano. miaina any Japon Izay no halavako niainako ny fahafahako manonona ny fomba fanononantsika zavatra amin'ny teny anglisy, ka ny Durano Miahiahy ny maodely Durano ho an'ny Tyro aho dia kodiarana vaovao io.
Tsy mbola nividy an'ity aho, fa nisy fahasamihafana eo amin'ny vidiny eo anelanelan'ny iray sy ny kodiarana marathon izay vao nasehoko anao, ity eo amin'ny ambaratonga fiarovana dia haavo efatra ihany no ambany dia tsy azoko antoka hoe ohatrinona ny habeny ny tsy fitovizan'ny kodiarana teo aloha dia maitso maitso, io dia fiarovana manga ambaratonga na inona na inona dikan'izany amin'ny fenitrao ny mombamomba anao araka ny ahitanao azy tsy dia manana fantsom-be toa an'io maodely marathon io, noho izany dia tsy dia voaaro kely ao izany fahatsapana izany, saingy mora vidy kokoa izany raha tsy ho an'ny kodiarana marathon ihany no nandoako vola 3000 yen isaky ny kodiarana, izany dia teo amin'ny 27 2 $ 6 ary ho an'ity iray ity dia manodidina ny 2.400 yen, ka $ 22 eo ho eo, ka mahatratra dimy ary enina dolara, ka dimy ambiny roapolo isan-jato eo ho eo, na eo aza ireo kodiarana dia mahatratra dimy amby roapolo isan-jato ny tahiry amin'ny vidiny raha toa ka manana fiainana talantalana mendrika izy ireo. Ireo koa dia toa mavesatra kely kokoa satria tsy dia misy loatra ny detection, saingy apetrako izy ireo ary hizaha azy ireo ary ho hitako ny fivoaran'izy ireo raha efa henonao talohan'ny Schwa tamin'ireny fotoana ireny alohan'ny vatolampy ah no de Reynaud ampahafantaro ahy Raha nahomby ho anao izy io, dia nisy tsikera vitsivitsy tsara tao amin'ny Internet ka antenaiko fa ho an'izy ireo ary raha miasa tsara izy ireo dia afaka mampiasa azy ireo bebe kokoa ary manangona vola kely kokoa ey amin'ny kodiarana mpampita ahy izay 25 ihany koa miaraka amin'izany ny fenitra mahazatra amin'ny bisikiletako rehetra ka nahazoako ny iray amin'ireo kodiarana. Ny kodiarana fifamoivoizana farany izay tena atolorako mafy dia ny hoditr'i Gator kontinanta, izay mety ho fantatry ny ankamaroan'ireo kodiarana ireo fa manana fiarovana mahatalanjona nampiasako ireo tamin'ny bisikiletako nandritra ny taona maro aho ary mbola tsy nahazo totohondry tokana noho izany ny kodiarana dia mahazo fiarovana avo lenta izay mbola hazakazako ihany, milamina sy haingana be koa ireo kodiarana, noho izany dia ampiasako ireo kodiarana ireo ho an'i Doraces izay nitaingenako teto Japon tamin'ny Crits tamin'ireo kodiarana izay napetrako ao anaty boaty sy crot Cat1 eto Japon Ireo kodiarana ireo dia tsy dia maivana loatra toy ny kodiarana hazakazaka hafa azonao ampiasaina, fa eo amin'ny sehatry ny hazakazaka aho izao dia tsy dia mifantoka amin'ny vokatra fa aleoko manana kodiarana. izay dia azo antoka fa tsy ho fisaka fotsiny Raiso ny risika ary alao moramora kely ary manana an'ity kodiarana en malemy kokoa ity ianao.
Ka rehefa miresaka momba ny kodiarana hazakazaka isika dia lohahevitra hafa tanteraka izay tsy horesahintsika anio - mitondra fiara ary aza manahy momba ireo zavatra ireo Ny teboka ratsy momba ireo kodiarana dia lafo kokoa noho ireo kodiarana roa hafa izay izahay dia nanoro hevitra ireo hanomboka amin'ny $ 50 eo ho eo ary raha tsara vintana ianao ary manam-potoana miantsena an-tserasera dia afaka mahita izany amidy ianao dia afaka mahazo izany mahazatra manodidina ny efapolo dôlara, raha tsara vintana ianao dia afaka midina hatramin'ny $ 35 midina fa miankina indray amin'ny karazana azonao io dia misy karazany roa ireo tadin-tsarimihetsika ireo dia misy ny fomba mivalona ananako eto izay lafo kokoa noho ny vakana vita amin'ny tariby izay ny fomba misokatra kokoa toa ireto roa vao notsidihintsika ireto. Ka raha hitanao izy ireo mora kokoa amin'ny Internet dia alao antoka fa mahazo ilay mety ianao, raha tsy Raha tianao ilay vakana mifangaro tariby sy ilay azo aforitra dia alao antoka fa misafidy ny tsara ianao. Ireo dia mazàna, farafahakeliny dimy dolara lafo kokoa noho ilay mpamatsy tariby $ 4045, raha amidy izy ireo dia hametraka roa amin'izy ireo aho ka raha mila manolo azy ireo aho dia omeko fa tsy miandry ary mahazo azy ireo ny vidiny feno any aoriana hividy raha tsy afaka mividy vitsivitsy amin'izy ireo aho satria hampiasa ny lohahevitra ianao amin'ny fotoana iray, noho izany ireo vokatra vita tanana any Alemà dia vokatra tena tsara nanolorana ahy tokoa nitaingina azy ireo teny amin'ny arabe vatokely mitaingina ny hazakazaka bisikileta hatraiza hatraiza ary amin'izao fotoana izao dia manana izany amin'ny bisikiletako amin'ny bisikiletan'ny bisikileta misy ahy amin'ny bisikiletan'ny vadiko manana izany amin'ny bisikileta cyclocross aho ary mitaingina tsara amin'ny arabe maloto, tsara amin'ny lalan'ny bisikileta an-tendrombohitra ary tsy misy olana maharitra maharitra. amin'ireto rollers haingana be ireto dia mbola azonao atao ny mandray anjara amin'ny hazakazaka amin'ireto.
Ka raha mitady kodiarana amin'ny komuter ianao dia mbola afaka mandeha mafy, haingana ary maharaka, ity no kodiarana tadiavinao raha te hitahiry vola ianao nefa mbola manana zavatra maharitra maharitra, mandehana miaraka amin'ireo Marathonons Rubble Azonao atao tsy mety koa. Ny olana tokana amin'ireto dia ny fananana fanoherana mihodinkodina kokoa ka tsy ho afaka handeha haingana toy ny hoditr'i Gator ianao, saingy angamba somary mandeha tsara kokoa amin'ny orana ireo, ka mila miteny aho hoe Tsy mety diso amin'izy ireo fa manantena aho fa nahasoa ity lahatsoratra ity raha manana sosokevitra kodiarana hafa ianao hampiasana fiofanana na fiverenana fa tsy nasongadiko ato amin'ity lahatsoratra ity azoko antoka fa betsaka ny hafa no misy . Ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra raha manana vahaolana hafa mora vidy ianao, tena tsy mahomby ny vahaolana azo antoka azafady ampahafantaro ahy azafady mba ampahafantaro ny tsirairay amin'ny hevitra ary azontsika atao ny manamarina azy ireo amin'ny ho avy rehefa mahazo vitsivitsy hafa isika. Mila kodiarana vaovao, izany no ho an'ny lahatsoratra androany Misaotra anao nijery Raha tianao ireo karazana lahatsoratra ireo ary te-hahita lahatsoratra bebe kokoa momba ny fiainana bisikileta any Japon sy ny toro-hevitra amin'ny bisikileta, dia tena tianao ity lahatsoratra ity ary koa raha manana hevitra vaovao ianao izay hodinihintsika dia tokony hiala. ao amin'ny fanehoan-kevitra raha te-hanohana ity fantsona ity ianao dia zahao ny rohy Patreon ary raha te hahita lahatsoratra bebe kokoa momba ny bisikileta sy ny fiainana any Japon ianao dia ity ny lisitry ny lahatsoratray momba ny bisikileta Japon izay ho an'ny anio indray io hatrany hatrany , misaotra nijery ary hahita anao amin'ny manaraka izahay amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo fitaovana
Moa ve ny kodiarana TPI avo kokoa tsy mahazaka puncture?
nykodiarana tpi avo kokoamananaBebe kokoakofehy isaky ny santimetatra ao amin'ny casing lamba (izay mifono eo anelanelan'ny sosona vita amin'ny fingotra) ary izy no manome nykodiaranafirafitra izany.Ambony tpkodiarana dia faritana hoeBebe kokoamalefaka. Maivana kokoa Afaka miova endrika amin'ny habakabaka izy ireotsara kokoanoho ny ambanyTPImitarika fitomboan'ny tanjaka.12 nov 2016 Novambra
Inona no mahasamihafa ny 60 TPI sy 120 TPI?
nyTPINy fanondroana dia midika ho kofehy isaky ny santimetatra ary maneho ny isan'ny kofehy isaky ny santimetatra amin'ny kodiarana kodiarana. Noho izany, a60 TPImanana mateza lehibe kokoa nefa mavesatra noho ny a120 TPI-Ny kodiarana voatondro. ny120 TPIkodiarana manolotra mandeha mora kokoa. Novambra
Inona no dikan'ny TPI?
Kofehy isaky ny refy (TPI)
Kofehy isaky ny santimetatra, fanafohezana matetika toy nyTPI, dia teny iray matetika ampiasaina rehefa miresaka fasteners.TPIdia teny ampiasaina hanampiana hamantatra hoe firy ny kofehy ao anaty santimetatra. Mba hamaritana ny dian-tongotra isaky ny santimetatra dia refesina ny refy iray ary avy eo dia isaina ny tampon'ilay fastener. Novambra
firy ny dingana tokony hataoko ao anatin'ny iray andro
Inona no atao hoe TPI tsara?
Ny tsara indrindra dia jerenao nyTPIny lamba casing alohan'ny hanaovana azy ho kodiarana. Ny lamba fanenjehana dia miovaova eo anelanelan'ny 15TPIho an'ny kodiarana azo ampiasaina hatramin'ny 120TPIho an'ny kodiarana avo lenta tokoa.
Fa maninona aho no mbola manao kodiarana fisaka amin'ny bisikiletako?
Tyre mitazona hatrany fisaka: Nykodiaranaefa reraka.
Rehefa mitranga izany, nykodiaranamora tohina kokoa noho ny triatra sy ny totohondry. Raha rovitra ny casing,fisakamihena ny fiarovana ary afaka miitatra mihoatra ny refy mahazatra azy ny fantsona. Ireo tranga roa ireo dia mety hiterakafisaka.16 Okt 2020
Inona no atao hoe 14 TPI amin'ny fanapahana?
Mampiasà a14-TPIravina mankanyHetezometaly matevina (mihoatra ny 1/8 ″) dia hanafainganafanapahanaampitahaina amin'ny 18-TPIravina.11 Okt 2020
Inona ny fitsapana TPI?
: serologicalfitsapanaho an'ny sifilis izay misy vahaolana misy ilay spirochete mampisy velona (Treponema pallidum) dia ampiarahina amin'ny serum raha misy ny famenon'ny immobilisation ny spirochetes mavitrika maneho vokatra tsara - fanafohezanaTPI.
Inona no tokony hataon'ny TPI amin'ny kodiarana an-tendrombohitra?
Ny kodiarana bisikileta an-tendrombohitra mahazatra midina dia mety hampiasa casing 60 tpi, raha ny kodiarana miampita na ny kodiarana eny an-dalana dia mety ho 120 tpi.
Ahoana no refesina ny TPI an'ny casing bisikileta?
Ny casing dia mampiasa sosona kofehy, refesina amin'ny tpi, apetraka mifanila ary apetraka amin'ny sosona mifampitohy. Ny kofehy lehibe kokoa dia mitovy amin'ny tpi ambany sy casing henjana kokoa, hoy ny fanamarihan'ny mpanao bisikileta teo aloha Ian Dille nanoratra tao amin'ny magazine Mountain Bike.
Inona ny salantsan'ny kodiarana isaky ny santimetatra (TPI)?
Amin'ny salan'isa, ny orinasa dia manome 120 TPI ho an'ny mpampiasa azy amin'ny kodiarana. Michelin dia manolotra TPI 33 ho an'ny kodiarana fidirana natao ho an'ny hazakaza-tsoavaly na hazakazaka midina. Ny kodiarana mpanelanelana dia misy 60 TPI raha toa kosa ny kodiarana avo lenta dia misy 127 TPI. Ny kodiarana Maxxis dia misy 60 TPI tsy anisany ireo kodiarana hazakazaka izay misy 120 TPI.